‘जत्ति नै जान्ने भए पनि फर्स्ट कि सेकेन्ड भन्ने डर हुन्छ नै’ :: Setopati
'जत्ति नै जान्ने भएपनि फर्स्ट हुन्छु की सेकेण्ड हुन्छु भन्ने डर त भइहाल्छ नी।'
'बादशाह जुट' सिनेमाबाट निर्देशकिय डेब्यू गरिरहेका जोनी सिंह राणा यसै भन्छन्। ठ्याक्कै उनको जस्तै अनुभूति अभिनेता सुशील श्रेष्ठले गरिरहेका छन्। यसअघि गरेका भन्दा फरक भूमिका गर्न लागेकोले पनि दर्शकले के भन्ने हुन् भन्ने डर उनलाई भएको हो। सिनेमा शुक्रबारबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको छ। यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा जोनी र सुशिल यस्तो सुनिएका थिएः
* बादशाह जुट' किन हेर्ने?
जोनी- सुशिल श्रेष्ठ र आमिर गौतमले यसअघि गरेका काम भन्दा एकदमै फरक काम गर्नुभएको छ। सिनेमा राम्रो बनेको छ, राम्रो सिनेमा सबैले हेर्नुपर्छ।
सुशिल- कन्टेन्ट राम्रो छ। मैले गर्दै आएका रोल भन्दा यो फरक छ। यस्तो रोल भोलिका दिनमा मैले पाउँछु कि पाउँदिन मलाई थाहा छैन।
* फरक भएको दाबी त सबैले गर्छन्। यसको कथा चलिआएको नयाँ हो वा कथा पुरानो तर प्रस्तुति नयाँ हो?
जोनी- कहीँ नभएको कतै नदेखेको त होइन। प्रस्तुति फरक छ। हामीले हेर्दै आएका रोमकोम सिनेमा भन्दा फरक छ। यसमा कमेडियन भनेकै सुशिल र आमिर हुन्।
सुशिल- यो सिनेमा जसरी पत्रकार र प्रहरीको चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ त्यसरी नेपाली सिनेमामा देखाइएको छैन। यसमा प्रहरी र पत्रकार मिल्यो भने केके हुनसक्छ त भने देखाइएको छ। मनोरञ्जनसँगै सन्देश पनि भएकाले दर्शकले फरक मनोरञ्जन सिनेमाबाट पाउनुहुनेछ।
* ए यो त हेरिसकेको सिनेमा भनिने खतरा त छैन उसो भए?
जोनी-‍ छैन। यो यताउतीबाट मिलाएर, चोरेर, तानतुन पारेर लेखिएको सिनेमा होइन। परिस्थितिजन्य कमेडीबाट अगाडि बढ्ने सिनेमा हो। जे छ आफ्नै किसिमको छ।
* यो सिनेमा गर्न तयार हुनुको कारण?
सुशिल- सिनेमाको विषय मनपरेर हो। मैले पढ्दा यसको स्क्रिप्ट हिन्दीमा थियो। त्यसमा पढ्दा राम्रो लाग्यो अनि मैले जोनीजीलाई नेपालीमा बनाउन भने। नेपालीमा पढ्दा पात्र र कथा रोचक लाग्यो। मलाई आजसम्म यस्तो भूमिका कसैले दिएको थिएन र भविष्यमा फेरि दिन्छन् कि दिदैंनन, त्यो पनि थाहा छैन। यो पात्रमा आफूलाई देखाउने मौका छ। पहिलाको सिनेमामा सुशिल ज्यानमात्र देखायो भन्ने कुरा आउँथ्यो यसमाचाँहि अभिनय पनि देखायो भन्ने मौका थियो।
*स्क्रिप्ट हिन्दीमा लेखिनुको कारण?
जोनी- यसको स्क्रिप्ट मैले मुम्बई हुँदा तयार गरेको हो। यो सबै भारतीय लेखकहरूले लेख्नु भएको हो। लेख्नचाँहि नेपालीमा बनाउने भनेरै लेखिएको हो।
* आफ्नै नजरमा यो सिनेमा कुन स्तरको सिनेमा हो?
जोनी- आफ्ना बारेमा त कसरी भन्नु र? तर बनिरहेको सिनेमा भन्दा कम छैन। नेपाली श्रोत-साधनका हिसाबले राम्रा नेपाली सिनेमा भन्दा कम छैन।
*सिनेमामा आफ्नो अभिनय कति सुधार भएको छ कि यसपटक पनि आलोचना खेप्नुपर्ने हो?
सुशिल- पहिलो सिनेमा मौकाले खेलेको हो। त्यतिबेला 'हिरो बन्छस?' भनेर कसैले मौका दिन सोधेको बेला 'किन नहुने?' भनेर खेलेको हो। 'होस्टल रिटन्स'पछि निर्माता सन्तुष्ट बने होलान तर म भइन। अनि मैले यसरी हुँदैन भनेर अभिनय सिकें 'एक्टर्स स्टुडियो'मा। त्यसपछि मलाई 'सायद २'को प्रस्ताव आयो, त्यो गरें। 'कारखाना' आदिबाट आफूलाई सुधार्दै आएको छु। पहिला भन्दा धेरै सुधारेको छु।
* निर्देशकले कलाकारको अभिनयमा कतिको लगाम कसिएको छ?
जोनी- कति छ भन्ने कुरा सिनेमा हेरेपछि थाहा होला। उहाँहरूका ३-४ वटा सिनेमा गरिसक्नुभएको छ। सिनेमामा काम गर्ने सिलसिलामा मैले उहाँहरूलाई धेरै फुर्क्याइन। अब उहाँहरूले अभिनयका लागि तारिफ पाउनुहुनेछ।
*चौथो सिनेमा भइसक्यो। अभिनेता हुँ भन्ने लाग्दैछ कि छैन्?
सुशिल- अगाडिका दिनमा यो क्षेत्रमा म त्यति रमाइलो मानिरहेको थिइन्, अहिले रमाइलो मानिरहेको छु, धेरै कुरा सिक्दैछु, अभिनयमा केहि परिवर्तन आएको छ। कति आफूले थाहा नपाएका कुरामा आफूलाई एक्सप्लोर गरिरहेको छु। जस्तो यो सिनेमाबाट मैले म कमेडी पनि गर्नसक्छु भन्ने बुझें। नयाँ कुरा सिक्ने चाहाना बढ्दैछ।
* लगातार सिनेमा नचलिरहेको अवस्था छ, यो चलेन भने के होला?
जोनी- यो एउटा खेल र परिश्रमको कुरा हो। के हुन्छ थाहा होला तर हामीले एउटा कलाकार र निर्देशकका रूपमा पूरा गर्नुपर्ने धर्म पूरा गरेका छौं। अब दर्शकको हातमा छ।
* दर्शकका रूपमा हेर्दा आफैलाईचाँहि यो सिनेमा कतिको मनोरञ्जक लाग्‍यो?
सुशिल- साँचो भन्नुपर्दा मैले एकदमै मजा लिएको सिनेमा हो यो।कति कुरा बेतुके लाग्ला तर सिनेमामा सबै तुक लागु नहुनपनि सक्छ। समग्रमा दुई घण्टाको सिनेमाले दिक्क बनाउँदैन।
* सिनेमालाई लिएर आफूहरू विश्वस्त होकी मनमा डर पनि छ?
जोनी- बनेको हिसाबले हामी एकदमै विश्वस्त छौं। अब मेकिङ र दर्शकलाई दिने कुरामा कहि ठगेका छैनौ। अब हलमा एउटा प्रोडक्टका रूपमा आउने हो। त्यसले के गर्छ भन्ने हो। हुन त जत्ति नै जान्ने भएपनि फस्ट हुन्छु की सेकेण्ड हुन्छु भन्ने डर त भइहाल्छ नी। त्यस्तै डर पासमात्रै हुनेलाई पनि कतिले पास हुन्छु भन्ने डर हुन्छ।
सुशिल- झण्डै दुई वर्षपछि सिनेमामा आउँदैछु। नयाँखाले भूमिकामा छु अब दर्शकले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर त छ। मलाई अगाडिका सिनेमा डर थिएन यसपटक फरक भूमिका भएकाले डराइरहेको छु। यसमा मेहेनत पनि मेरो धेरै नै परेको छ।
(तस्विरहरूः निशा भण्डारी)
प्रकाशित मिति: आईतबार, कात्तिक १७, २०७६, ०२:१४:००